Ny ondana ve no an'ny loha sa ny hatoka? - Vaovao - Dongguan FUYA METAL & Plastic Products Co., Ltd.
Ny olon-dehibe iray dia tokony hatory tokony ho amin'ny fito ka hatramin'ny sivy ora isan'andro. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mandany torimaso ny ampahatelon'ny fiainana. Ny hazondamosin'ny tranon-jaza kosa mandany ampahefatry ny fotoanany miaraka amin'ny ondana. mampiasa ondana? Ny fampiasana ondana tsy mety dia mety hisy vokany lehibe eo aminao.
Voalohany, spondylosis vozon-tranonjaza.
Raha mampiasa ondana avo loatra isika rehefa matory, dia mitovy amin'ny fanerena hampidina ny loha mandritra ny dingan'ny torimaso manontolo. Mandritra ny fotoana maharitra, dia hanitsy ny fiolahana ara-batana amin'ny hazondamosin'ny vozon-tranonjaza, miteraka fahasimbana ary miteraka spondylosis vozon'ny tranonjaza.
Faharoa, mihena ny ati-doha.
Nandritra ny fotoana elaela, ny lohany dia ho ao anatin'ny tsy fahampian'ny ra sy ny famatsiana oksizenina mandritra ny fotoana maharitra, izay hisy fiantraikany amin'ny metabolisma sela ao amin'ny ati-doha ary hitarika ho amin'ny fahaverezan'ny fahatsiarovana, ary ireo antitra antitra sy antitra dia hanana aretin-tsaina ary atrophy atidoha mialoha.
Fahatelo, fahafatesana tampoka.
Ny ondana tsy mitombina dia zava-dehibe koa izay miteraka aretim-po sy aretim-bavony, lalan-dra, lalan-drà ary aretina hafa mampidi-doza. ny ischemia, hypoxia, ary ny aretina mihombo dia miteraka fahafatesana mihitsy aza.
Fahefatra, misy fiatraikany amin'ny miaina.
Ny ondana ambany loatra dia hitarika amin'ny famatsian-dra tsy mitovy, mora miteraka fitohanana sy fivontosan'ny mucosa orona. Marefo ny mucosa orona ary mety hanelingelina ny fisefoana ny fivontosana.
Fahadimy, fahaverezan'ny fahitana.
Ny tsy fantatry ny olona maro dia ny hoe mampiasa ondana tsy izy dia misy ifandraisany amin'ny masonao. Rehefa tsy voatazona ny hazondamosin'ny vozon-tranonjaza dia afaka mamikitra ny hozatra optika. Ny vokatra farany: ny fahitana tsy fahitana, ny tahotra ny mazava, ny ranomaso, ny fanaintainan'ny maso ary, amin'ny toe-javatra mafy, ny fahajambana.
Fahenina, fiakaran'ny tosidrà.
Manana karazana tosidra ambony hiantsoanao hoe "tosidra ambony fiakaran'ny tosi-drà", io ondana io dia tsy mety antony. Ny fiakaran'ny tosidrà voan'ny vozon-tranonjaza, vokatry ny lalan-drà carotid famatrarana vozon-tranonjaza, miadana ny tahan'ny rà, ka mitombo ny tsindry . Amin'izao fotoana izao dia mihabetsaka ny trangana fiakaran'ny tosi-drà amin'ny tanora. Ankoatra ny filalaovana finday dia misy ifandraisany amin'ny ondana tsy mety ihany koa.
Ny soroka fahafito, henjana.
Avo loatra ny ondana, mety handratra ny hozatra amin'ny ratra ara-pananahana sy ny tadin'ny ligament, miteraka fikorontanana, mamaivay miandry, miseho ny soritr'aretina toy ny fanaintainan'ny hatoka sy ny soroka, hemp tanana, fanina.
According to the study, 150 million of the world's 600 million mahita torycs are affected by uncomfortable pillows, and unscientific pillows are the number one cause of sleep disorders.Ordinary pillow because material is qualitative, pillow type, soft and hard degree is not scientific, can cause cerebrum to offer blood inadequacy, affect sleep central nervous regulation directly, bring about morpheus disorder, serious person can cause long-term and habitual mahita tory.
Ny olona sasany aleony matory tsy misy ondana. Ny olona mandry any an-damosina be loatra, mora moka vava ary avy eo mamokatra vava maina, lela maina, fanaintainan'ny tenda ary tranga moka. Raha mora matory eo an-damosinao ianao dia ampiasao ondana manodidina ny 8 ka hatramin'ny 13 santimetatra ny haavony, ny halavan'ny totohondrinao, ary asio ondana iray eo ambanin'ny lohalinao mba hanamaivanana ny tsindry amin'ny hazondamosinao.Raha efa zatra matory eo anilanao ianao, ny haavon'ny ondana dia tokony hitovy amin'ny ny sakan'ny sorokao, izay 13 ka hatramin'ny 16 cm, ka ny hazondamosin'ny vozon-tranonjaza sy ny hazondamosin'ny lumbar dia mitovy ny haavony.